मलाई त खपिनसक्नु | Kamsastra
मलाई त खपिनसक्नु
Sex, मलाई त खपिनसक्नु,
‘तँलाई त्यस्तो रहर लाग्दैन?’ चुम्बन गरिरहेका एकजोडी देखाएर निशा भन्छिन्।
‘के-के भन्छे, के-के, चूप लाग्’ उषाले हाँसेजस्तो गरेर उत्तर दिई।
‘तँ र म त एकै आत्माका साथी हौँ। अनि तेरो र मेरो बारेमा एक-अर्कामा निकै थाहा पनि छ। तेरो मनको कुरा मलाई किन लुकाउँछेस्। बरु मलाई भन्, म तेरो हरइच्छा पुर्याइदिन तयार छु’- निशाले धेरै सदाशयता प्रकट गर्दै भनी।
‘धन्य निशा, तँ मेरो आत्मीय साथी होस्, कति प्यारी छस् है – एक दिन तँसँग भेट्न पाइन भने त मलाई कस्तो नरमाइलो लाग्छ’- उषाले आभार प्रकट गरी।
‘उषा तयार भइस् ?’- निशा बोल्दै उषाको कोठामा प्रवेश गरी।
‘हुँदैछु, एकछिन् पख न !’- उषाले ड्रेस मिलाउँदै भनी।
‘छ्या, के कुर्ता-सुरुवाल लगाएकी, फुकाल् त्यो, पेन्ट र टिसर्ट लगा।’ निशाको बोलीले तुरुन्तै प्रभाव परेझैँ उषाले ड्रेस चेञ्ज गरी। टि-सर्ट र पाइन्टमा ऊ निकै आकर्षक देखिई। टाइट टिसर्ट र पाइन्टले उसका अङ्गहरू पुष्ट देखिए। निशाले कार ड्राइभरलाई गाडी स्र्टार्ट गर्न भनी। उनीहरू काठमाडौँको गुण चलचित्र घर -ग्वार्को) मा पुगे। ड्राइभर गाडी लिएर फर्कियो। टिकट लिएर उनीहरू सिनेमा हलभित्र प्रवेश गर्ने तरखर गर्दै थिए, त्यहीबेला निशाले एकजना आफ्नो पुरानो साथीलाई देखिन्। ‘विजय !’ निशाले हल्का स्वरले त्यो पुरुषलाई बोलाई। विजय पछाडि फर्कन्छ, ‘ओ ! निशा, के छ तिम्रो खबर – आजकाल त कतै देखिँदैनौ। कहाँ गायब भयौ ?’- विजय निशाको नजिक आएर भन्यो।
‘ठीकै छ नि विजय, कहाँ जानु र, बरु तिमी पो मुखै देखाउन छाड्यौ। के हो इञ्जिनियर भइयो भनेको सुनेकी थिएँ। कतै त्यही भएर हामीलाई वास्तै नगरेको हो कि क्या हो ?’- निशाले व्यंग्य गर्दै भनी।
‘वाफ रे मलाई त्यस्तो सोचेको – म मेरा पुराना साथीहरूलाई कदाचित बिर्सन्न क्या ! अँ बरु इञ्जिनियर हुनचाहिँ अझ एक वर्षपर्खनुपर्ने भएको छ। इञ्जिनिर हुँदैमा साथीहरूलाई बिर्सनेचाहिँ होइन नि !’- विजयले स्पष्टीकरण दियो।
‘ल ठीकै छ। बरु परिचय गरौँ न विजय, ऊ मेरो कलेजकी अत्यन्त मिल्ने साथी उषा, अनि उषा ऊचाहिँ मेरो स्कूल पढ्दाको साथी विजय, भविष्यको इञ्जिनियर।’ निशाले दुवैको एक-अर्कामा परिचय गराई। दुवैले हात मिलाए।
‘ल कुरा गर्दै गरौँला अहिलेचाहिँ सिनेमा हेर्न जाऔँ’- निशाले भनिन्। सबैजना हलभित्र पस्छन्। विजय मनमा सोच्दै हुन्छ- ‘क्या राम्री केटी रै’छ बा, कहाँ बस्छे होला यो केटी, अनि कहाँ होला घर – फ्रेण्डसीप बढाउन पाए राम्रै हुन्थ्यो !’
‘ल त विजय, आज अकस्मात् भेट भएर सँगै सिनेमा पनि हेरियो, फोन गर्दै गर्नु, हामी अहिले जान्छौँ’- निशाले विजयसँग बिदा मागिन्। ‘कहाँ जाने ? केही सवारी छ ?’- विजय प्रश्न गर्छ।
‘बागबजारतिर जाने। सवारी देखेनौ त यत्रा ट्याक्सीहरू छन्’- निशाले हाँस्दै जिस्कने मुडमा भनिन्।
‘ठीकै छ, मेरो कार छ। म पनि बागबजार नै जाने हो। जाऔँ न त मसँगै’- अनुरोधपूर्ण भाषामा विजयले भन्यो।
‘जाऔँ न त, मेरो गाडी अहिले आउँदैन, ट्याक्सीमा जानुभन्दा विजयकै गाडीमा जाऊँ है !’- उषातिर हेर्दै निशाले भनिन्। उषा सहमत भई। दुवैजना विजयको गाडीमा बस्छन्। गाडी गुड्न थाल्छ। अध्ययनमा अत्यन्त लगनशील भएर पढ्ने विजय धनी बाबुको छोरा भए पनि निकै सरल छ। ऊ बाहिरी संसारसँग निकै अनभिज्ञ छ।
‘अघि त केही कुरै गर्न पाइएन, अनि भन निशा के छ तिम्रो खबर ?’
‘ठीकै छ, बाँचिएकै छ। तिम्रो झैँ इञ्जिनियरिङ पढ्न नपाए पनि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेकी छु’- निशाले विजयको प्रश्नको उत्तर दिइन्। विजय अब कुरामा एक कदम अगाडि बढ्न चाहन्छ- ‘हामीले गफ त खुबै गर्यौँ तर तिम्रो साथी त बोल्नु नै हुन्न नि, निशा ?’
‘हैन, तपाईंहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। बिनाप्रसङ्ग कुरा गर्दा हाँस्यको पात्र भइन्छ भनेर मात्रै नबोलेकी’- उषाले स्पष्ट पारी।
‘प्रसङ्ग त जति पनि छ नि, बरु तपाईंलाई प्रसङ्ग निकाल्न गाह्रो भयो भने मै निकाल्छु। ल भन्नुस्, तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ ?’- विजयले बडो स्फूर्तिसाथ आफ्नो मनको भाव प्रकट गर्यो।
‘अनि तपाईंको घरचाहिँ कहाँ पर्छ नि ?’ विजय उषाको बारेमा अझ बढी जानकारी लिन चाहन्छ।
‘मेरो घरचाहिँ तराईमा पर्छ। रौतहटतिर हो’- उषाले आफ्नो घरको ठीक स्थान नबताए पनि नजिकको ठाउँ भनी।
यसैबीच उनीहरू फोन नम्बर साटासाट गर्छन्। उषाले होटलको रिक्वेस्ट फोन बताइदिई। उषाले पनि विजयको बारेमा सोधी। विजयले गाडी रोक्छ, दुवै जना पुतलीसडक ओर्लन्छन्- ‘ल त विजय बाई सी यु अगेन, ओ के !’- निशा बोल्छिन्।
‘सेम टू बोथ !’ विजयले उत्तर दिन्छ। उषा र निशा हिँड्दै उषाको कोठातिर लाग्छन्। विजय उषाको सुन्दरता, उसको सुन्दर अनुहार, पुष्ट वक्ष, अग्लो कद, भद्र व्यवहार सम्झँदै त्यो रातभरि उसले उषाका बारेमा सोचिरह्यो।
बिहान कलेजबाट फर्केपछि खाना खाइसकेर आफ्नो कोठामा विश्राम लिइरहेको बेला उषालाई उनको टेलिफोन आएको जानकारी होस्टलको टेलिफोन किपरले बताएपछि उषा टेलिफोन उठाउन जान्छिन्। रिसिभर उठाउँदै- ‘हेल्लो, को बोल्नुभएको होला -’
उताबाट पुरुष आवाज आउँछ- ‘हेल्लो, चिन्नुभएन ?’
‘चिन्न सकिन त, को हो तपाईं ?’- अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उषाले भनिन्।
‘तपाईं चाँडै बिर्सनुहुन्छ कि के हो ? यति निष्ठुरी हुन त भएन नि, यस्तो सम्झेर हामीलाई पनि फोन गरे हुन्छ नि !’- पुरुष आवाज आयो।
‘तपाईं को हो मैले चिन्न सकिन। त्यसैले केही भन्नु छ भने प्लीज भनिहाल्नुस्, नत्र मैले फोन राखेँ फाल्तु गफ गर्न मसँग समय छैन’- उषाले अलि कडा स्वरमा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्छिन्।
‘सरी, मैले यहाँलाई फोन गरेर डिस्टर्ब गरेँ भने फेरि पनि सरी चाहन्छु। उषाजी, यहाँले स्वर चिन्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर मात्र लामो कुरा गरेको हुँ, म विजय हुँ’- विजयले नाम बतायो।
‘ओ माई गड ! आइएम सरी, विजयजी ! म त तपाईं हो भन्ने एक मनले पनि सोचेकी थिइन’- उषाले आर्श्चर्य प्रकट गर्दै जवाफ फर्काई।
विजयसँगको कुराकानीपछि उषा पनि धेरै खुसी हुन्छिन्। उनी एक्लै हाँस्छिन्। ऐनामा हेर्छिन्, अनि फेरि विजयलाई सम्झन्छिन्। विजयसँग प्रेम गर्दै हिँडेको अनि विजयलाई पति बनाएको सम्झन्छिन्। छ्या मैले के सोचेकी – आफैँसँग प्रश्न गर्छिन्। दुवै जना एक-अर्काप्रति बेचैन बन्छन्। भोलि निर्धारित समयमा उषाले फोन गरी। विजय उषाको फोन पाएर खुसी हुन्छ। उनीहरू फोनमा अलिक नजिक भएझैँ जिस्किएर कुरा गर्छन्। अनि पुनः फोन गर्ने वाचाका साथ फोन राख्छन्। उनीहरू बारम्बार फोनमा कुराकानी गर्छन्। जसले गर्दा आत्मीय वातावरण सिर्जना हुन्छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष भेट्ने वाचा गरे।
उषाले निशालाई एकदिन भेटमा भनिन्- ‘निशा मलाई विजयले अति नै फोन गर्छ, अनि भोलि भेट्न पनि भनेको छ।’
निशा उषाको चिउँडो समाउँदै बोल्छिन्- ‘ठीकै छ भेट् न त, के भयो र - विजय ह्याण्डसम पनि छ, भद्र पनि छ। भेट है उषा अब तेरै त दिन आए नि, गरिखा। मैले तँलाई कृत्रिम वस्तु चिनाएकी थिएँ, अब वास्तविक भेटिस्। विजय त्यस्तो खाइलाग्दो छ, उसको चीज पनि त विशाल नै होला ! मोरीले खुब मोज गर्ने भई, बधाई छ !’
‘छ्या, बढ्दा नबोल् है मोरी’ लाडे पाराले उषाले भनिन्।
एकदिन निशाले उषालाई सोधिन्- ‘ए उषा, तँलाई मैले कृत्रिम प्रविधि ल्याएर राम्ररी सिकाइसकेकी छु, विजयको वास्तविकतासँग खेल्दा झन् पारङ्गत भइसकिस् होला नि, कत्रो रैछ त्यसको माल – मज्जा त खुब दिन्छ होला नि !’
छि, त्यस्तो हैन क्या, हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो कार्य गरेका छैनौँ’- उषाले उत्तर दिइन्।
‘उसो भए अब तँ बुझ् कि विजय तेरो हुनै सक्दैन, ऊ तँबाट उम्क्यो। हरपुरुषले आफ्नी प्रेयसीबाट सधैँ त्यही कुरा चाहिरहेको हुन्छ, जुन तैले अहिलेसम्म पनि दिएकी रहिनछस्। यदि तँ विजयजस्तो धनाढ्यको सम्पत्तिमा आजीवन राज गर्न चाहन्छेस्, अनि इञ्जिनियरकी पत्नी बन्न चाहन्छेस् भने यो तेरी सानीकान्छी विजयलाई सुम्पिदे’- निशाले छिल्लिँदै भनिन्।
फेरि निशा बोलिन्- ‘विजयले कहिलेकाहीँ तँलाई कतै टाढा घुम्न जाने प्रस्ताव राखेको छ कि छैन – कुनै पुरुषले त्यस्तो प्रस्ताव राखेमा नजानिँदो पाराले उसको उद्देश्य त्यही हो भन्ने बुझ्नर्ुपर्छ। थाहा पाइस् होला नि !’
निशा गइसकेपछि उषा निशाले भनेका कुरा सम्झिरहन्छिन्। र, एक पटक विजयले उसलाई नगरकोट घुम्न जान राखेको प्रस्ताव पनि सम्झिन्छिन्। ‘के उसो भए विजय मेरो हुन सक्दैन – के म उसको सङ्गिनी बन्न सक्दिन – होइन, नाइँ म उसकै हुन्छु। म उसलाई खुसी पार्छु’ उषा एकान्तमा आफैँसँग प्रश्न गर्छिन् र उत्तर पनि दिन्छिन्।
उषा फोन डायल गर्छिन्- ‘हेल्लो, उताबाट पुरुषको आवाज आउँछ। उषा पुनः बोल्छिन्- को विजय हो -’ ‘उषा हो, मलाई नचिनेको कि के हो उषा -’ विजय बोल्छ।
‘चिनिहालेँ नि, बरु तपाईं भन्नुस् न कसरी मलाई चिन्नुभो -’ उषाले सोधिन्।
‘चिन्दिन कि के हो त – आफ्नी मायालाई नचिन्ने कुरा पनि आउँछ - तिमी जहाँ भए पनि तिम्रो आवाज सुन्नेबित्तिकै तिमीलाई चिनिहाल्छु नि’- विजयले प्यार प्रकट गर्यो।
‘बुझेँ बाबा, बुझेँ, हजुरले मलाई चिन्नुहुन्छ। अनि तपाईंको खबर के छ - हिजोआज त सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ नि -’
‘अलि व्यस्त थिएँ त्यसैले, फुर्सद भए दर्शन पाउँ कि -’ विजयले आफ्नो कुरा बताउँछ।
के खोज्छस् कानो आँखा भनेझैँ उषाले पनि त्यही चाहेकी थिइन्। भनिन्- ‘हजुरको जो आज्ञा ! दुई बजे त्यही कलेजअगाडि आउनु न है !’
‘हुन्छ, दुई बजे म आउँछु, अहिले राखौँ’- विजयले समर्थन जनायो।
Labels: Sex, मलाई त खपिनसक्नु